22 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin UK 2022
22 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin UK
Ma xiiseyneysaa koorsooyinka internetka? Waad ka qayb qaadan kartaa mid ka mid ah koorsooyinkan khadka tooska ah ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin ka socda Boqortooyada Midowday (UK) meel kasta oo aad adduunka ka joogto, waxaad ku baran kartaa aqoon cusub, waxaad ku baran kartaa xirfado cusub oo dijitaal ah oo lacag fiican kugu soo raadin kara welina waxaad u tahay fursad aad ku hesho shahaado la xaqiijiyey.
Barashada khadka tooska ah waxay noqon kartaa mid xiiso leh, waxaad ka heleysaa wax badan oo xirfado waxtar leh, aqoon iyo waayo-aragnimo ka socota barayaasha ugu sarreeya meel kasta oo aad adduunka ka joogtid adoo adeegsanaya kombiyuutar / kombiyuutar iyo xiriir internet oo deggan.
Xirfadahan aad kasbatay waxay aadi karaan waddo dheer si ay kaaga caawiyaan nolosha, waxay kuu furi kartaa fursado shaqo oo kala duwan, waxay kugu xiri kartaa xiriir caalami ah oo muhiim ah iyo xitaa xiriiro maxalli ah, iyo wixii intaa ka sii badan, waxaad heli doontaa lacag markii aad bilawdo suuqgeynta xirfaddaada .
Barashada khadka tooska ah, marwalba iska hubi inaad hesho shahaado wixii aad soo baratay markasta oo ay suurta gal tahay. Tani waa muhiim maadaama shahaadadu kaa sii fogayn karto shaqaalaha ama haddii aad go'aansato inaad madax-bannaanaato, iyadoo shahaadaada loo soo bandhigayo macaamiisha inay arkaan, waxay kaa dhigeysaa mid xirfad leh, asal ah oo lagu kalsoonaan karo in lagu siiyo shaqo.
Sikastaba, waxa ugu muhiimsan marka ay tahay helitaanka xirfadaha waa ogaanshaha waxa la sameeyo iyo sida loo abuuro qiimo isla markaana lacag looga sameeyo xirfadaada, kaliya ma ahan helitaanka shahaado aadan xitaa difaaci karin.
Wax macno ah kuma lahan wixii xirfad, aqoon, ama waayo-aragnimo ee aad hore u lahayd ee aad had iyo jeer ku dari lahayd, ka dib, aqoon la'aan waa qashin. Waxaa laga yaabaa inaadan garanayn meesha aad ku dambayn doonto sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad urursato xirfad inta ugu macquulsan. Shakhsiyaadka leh xirfado badan ayaa horumar ku leh adduunyada maanta, adiguba waad awoodi kartaa.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay qiimaha barashada koorsooyin badan oo khadka tooska ah ah intaad ka qaban karto, halkan waa meesha aad ka heli karto koorsooyinka internetka ee bilaashka ah, waxaa jira kumanaan noocan oo kale ah oo internetka ah oo kaliya sugaya in la baaro. Si loo yareeyo raadintaada, maqaalkani wuxuu bixiyaa in ka badan 20 koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo leh shahaadooyin gudaha Boqortooyada Midowday oo aad kala dooran karto oo aad ku kasban karto xirfadda aad dooratay.
Koorsooyinkan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka ku leh Boqortooyada Midowday ee aan hoos ku taxay ma aha oo kaliya dhowr qof oo la soo xulay, maxaa yeelay waxaa lagu sheegay "UK" macnaheedu maahan inay kaliya u tahay muwaadiniinta Boqortooyada Midowday, waxay macnaheedu tahay in koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ay bixiyaan dad kala duwan Jaamacadaha ku yaal Boqortooyada Midowday, kulliyadaha, ururada iyo machadyada kale ee waxbarashada.
Ku dhowaad qof walba, meel kasta oo adduunka ah, oo leh xiriir internet oo deggan, taleefannada casriga ah / kiniiniga ama kombiyuutarka iyo go'aaminta barashada ayaa ku biiri kara mid ama in ka badan koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee Boqortooyada Midowday oo wata shahaadooyin. “Shahaadooyin”, koorsooyinku 100% waa bilaash inay waxbartaan waxayna la yimaadaan shahaadooyin dhammaystir ahaan caddayn ahaan, qof kasta oo ay khuseyso, inaad xirfad ku leedahay aaggaas aad baratay.
Koorsooyinka khadka tooska ah waa bilaash, sidaan kor ku soo sheegay, laakiin shahaadooyinka, xaaladaha qaarkood, ma noqon karaan sidaas maadaama ay ku imaan karto lacag yar ama lacag eber ah taas oo ku xiran hay'adda bixisa koorsadaas gaarka ah. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan loo eegin kiisku had iyo jeer wuxuu hubiyaa inaad hesho shahaado dhammaystir ah markaad dhammaystirto koorso internetka ah, bilaash ama maahan, shahaadooyinka ayaa si weyn u kordhiya fursadda waxayna kaa dhigayaan mid dhab ah.
Waxaa laga yaabaa inaanan xoogga saarin dejinta faa'iidooyinka helitaanka shahaadada markaad dhammaystirto koorso internetka ah, laakiin waxaan bixiyay sababaha ugu waaweyn ee kor ku xusan waana inaad tixgelisaa sababahan sidoo kale, waxay kaa faa'iideysan doontaa oo keliya adiga iyo shaqadaada.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee barashada internetka ayaa ah raaxada, waxaad u baahan tahay inaad qeexdo raaxadaada qaabkan waxbarasho oo aad uga faa'iideysato. Haddii aad ku qanacsan tahay inaad wax ku barato sariirtaada, qolka jiifka, gaariga, cuntada, iwm wax macno ah ma leh, illaa intaad ku raaxeysaneyso. Si ka duwan dugsiga caadiga ah ee aan cidina dan ka lahayn haddii aad ku qanacsan tahay fasalka iyo in kale, waa inaad halkaas fariisataa oo wax ku barataa.
Marka, tani waa inay kaa dhigeysaa inaad tixgeliso barashada khadka tooska ah iskuna day inaad ku biirto mid ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin ku yaal Boqortooyada Midowday oo xiisaynaya xiisahaaga, oo aad xusuusato, waxaad had iyo jeer baran kartaa wax ka badan hal dhammaantood waxay kuxiran yihiin go'aankaaga iyo diiraddaada
Ku saabsan Koorsooyinka onlaynka ah ee Bilaashka ah ee wata Shahaadooyinka Boqortooyada Midowday
Kaydinta Buug-xisaabeedka Shaqsiyeed iyo Ganacsi
Tirakoobka Ganacsiga Caalamiga ah
Barnaamijyada Hal-abuurka ah ee loogu talagalay Warbaahinta Digital & Barnaamijyada Moobilka
Maareynta Shirkadda Mustaqbalka
Hordhaca Xaqiiqada Virtual
Noocyada 3D ee Xaqiiqda Furaha
Diblomaasiyadda Caalamiga: Qaramada Midoobay ee Adduunka
Dembi ilaa Ciqaab: Hordhac Caddaaladda Danbiyada
Laga soo bilaabo Saboolnimada ilaa Barwaaqo: Fahamka Horumarinta Dhaqaalaha
Koorsada Manicure iyo Pedicure Bilaash ah
Bilaabida Ganacsi Online ah
Xirfadaha Dijital ah: Suuqgeynta Dijital ah
Falanqaynta Xogta ee Go'aan Qaadashada: Hordhac Isticmaalka Excel
Hordhac Amniga internetka
Heerka 2aad ee Xirfadaha IT-ga ee Aasaasiga ah
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Naqshadeynta Websaydhka
Koorsada Shahaadada Online-ka ee Bilaashka ah ee Buug-haynta loogu talagalay Xisaabinta Shakhsi iyo Ganacsi
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee HR Fundamentals
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Tirakoobka Ganacsiga Caalamiga ah
Koorso Shahaado Bilaash ah oo Online ah oo loogu talagalay Barnaamijyada Hal-abuurka ah ee loogu talagalay Digital Media & Barnaamijyada Moobilka
Koorsada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Cunnada oo ah Dawo ahaan
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Maareynta Shirkadda Mustaqbalka
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Hordhaca Xaqiiqda Virtual
Koorso Shahaadada Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee moodooyinka 3D ee Xaqiiqda Virtual
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Istaraatiijiyada Shirkadeed
Koorsada Shahaadada Online-ka ee Bilaashka ah ee Dibloomaasiyadda Caalamiga ah: Qaramada Midoobay ee Adduunka
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Saboolnimada ilaa Barwaaqada: Fahamka Horumarinta Dhaqaalaha
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Maareynta Mashruuca
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Koorsada Manicure iyo Pedicure
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaabista Ganacsi Online ah
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Xirfadaha Dijital ah: Suuqgeynta Dijital ah
Koorsada Shahaadada Online-ka ee Bilaashka ah ee Falanqaynta Xogta ee Go'aan Qaadashada: Hordhac Isticmaalka Excel
Koorsada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Hordhaca Amniga Internetka
Koorsada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Fahamka Autismka
Koorsada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Maamulka Xafiiska
Koorsada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Xirfadaha IT-ga Aasaasiga ah Heerka 2
Haddii aad had iyo jeer rabto inaad wax ku barato Boqortooyada Midowday ama aad marwalba isweydiiso sida ay tahay in wax lagu barto halkaas laakiin duruufaha qaarkood awgood ma awoodi kari weyday, markaa waxa ku xiga ee saxda ah ee la sameeyo ayaa ah ka qayb qaadashada koorso khadka tooska ah oo ay toos u bixiyaan barayaasha sare iyo macallimiin ka tirsan machad ka tirsan Boqortooyada Midowday (UK), xaaladdan oo kale koorsooyinku waa lacag la'aan, waxaad u baahan tahay inaad bixiso dime si aad uga qaybqaadato laakiin waxaad bixin kartaa caddeynta.
Maqaalkani, koorsooyin bilaash ah oo khadka tooska ah oo shahaadooyin ku leh Boqortooyada Midowday ayaa ka kooban in ka badan 20 koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo shakhsiyaad daneynaya oo ka socda meel kasta oo adduunka ah ay ku soo biiraan oo ay ku helaan aqoonta iyo xirfadda ay doorteen. Koorsooyinka onlaynka ah ee bilaashka ah ee leh shahaadooyinka Boqortooyada Midowday ee aan soo ururiyey waxay bixiyaan xirfadda, aqoonta iyo waayo-aragnimada looga baahan yahay adduunka ganacsiga maanta.
Tani waxay ka dhigeysaa koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee leh shahaadooyinka Boqortooyada Midowday inay yihiin kuwo qiimo weyn leh, gabi ahaanba waa la heli karaa, waxay ku siinayaan fursad aad ku sahamiso mowduucyo cusub, iyo shaqooyin xiiso leh, waana wax aad u xiiso badan. Koorsooyinkan onlaynka ah ma dooranayaan cidda ka qaybqaadan karta, illaa inta aad leedahay xirfadaha aasaasiga ah ee qorista iyo akhriska waad ka qaybqaadan kartaa, baran kartaa xirfaddaad dooratay oo shahaadadana lagu siinayaa.
Kaqeybgalka koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka ee Boqortooyada Midowday waxay kaa buuxin doontaa xiisahaaga waxa ay u egtahay inaad wax ka barato jaamacad Ingiriis ah ama koleej iyo xitaa haddii aad weli u sii socoto inaad dhigato iskuul UK ah, adigoo kaqeyb galaya koorsooyinka internetka ee bilaashka ah sidii biyo adiga lagugu tijaabinayo, si marka aad ugu dambayntii aad wax uga barato halkaas, ay kuugu noqon doonin wax kugu cusub gabi ahaanba.
Baadhitaan ballaadhan kadib, waxaan awooday inaan la imaado 22 la heli karo, oo si buuxda loo heli karo, koorsooyin bilaash ah oo bilaash ah oo leh shahaadooyin ku yaal Boqortooyada Midowday oo loogu talagalay inay ku siiso xirfadaha ay u baahan tahay meheradda casriga ah ee casriga ah iyo iyada oo aan la sii dheerayn, waxaan ku qori doonaa koorsooyinkan internetka ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin gudaha UK.
Koorsooyinkan 22-ka ah ee khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka ku leh Boqortooyada Midowday ee aan hoos ku taxay waxaa bixiya qaar ka mid ah jaamacadaha iyo kulliyadaha ugu waaweyn Boqortooyada Midowday oo ay ka mid yihiin Jaamacadda Leicester, Jaamacadda Southampton, King's College, London, Caafimaadka Bulshada England, Jaamacadda Oxford, iwm. waxaa lagu bixiyaa noocyo kala duwan baraha internetka sida FutureLearn, edX, Alison, Oxford Center Study Center (OHSC), Coursera iyo kuwa kale.
Koorsooyinka 22ka ah ee khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka ku leh Boqortooyada Midowday ee liiska ku jira waa;
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka onlaynka ah ee bilaashka ah ee leh shahaadooyinka Boqortooyada Midowday, oo ay bixiyaan Jaamacadda London macallimiinta sare ee waaxda xisaabinta ee jaamacadda. Koorsadani waxay ku siin doontaa xirfadaha iyo farsamooyinka loo baahan yahay si wax ku ool ah loogu qaabeeyo degel xirfadle ah oo awood u yeelan kara inuu la qabsado cabbirka shaashad kasta.
Kani waa koorso 4-todobaad ah oo khadka tooska ah ah iyo mid ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Boqortooyada Midowday ee loogu talagalay in lagu siiyo kaqeybgalayaasha xiisaha leh awood ay ugu yeelan karaan isku dheelitirka buugaagta iyo maareynta maaliyadeed labadaba shakhsi ahaan ama ganacsi ahaan. Waxaad baran doontaa habka guud, xisaabta la xiriirta koorsada iyo sida aqoontaada loogu dhaqmo.
Urur kastaa wuxuu la macaamilaa maaliyadda, iyo fahamkaaga inaad awood u leedahay inaad si fiican isugu dheellitirto buugaagta iyo sida faa'iidada iyo khasaaruhu u horseedaan dakhli ama deyn, oo ay la socdaan shahaado lagu muujiyo, waxaa ku raadin doona macaamiisha qadka iyo khadka tooska ah labadaba.
Mid ka mid ah koorsooyinka onlaynka ah ee bilaashka ah ee leh shahaadooyinka Boqortooyada Midowday oo qaadata 5 toddobaad si loo dhammaystiro, HR Fundamentals waxay shaqsiyaadka u soo bandhigaysaa ku-dhaqanka ilaha aadanaha, kobcinta iyo ku-qalabeynta xirfadaha saxda ah ee aad u baahan tahay si aad u noqoto xirfad-yaqaan HR.
HR waxay muhiim u tahay urur waxaana laga heli karaa dhammaan qaybaha ganacsiga, waxay halkaas u joogaan inay doortaan nooca saxda ah ee shaqaalaha, koox mashruuc iyo ganacsi kasta oo kale oo ka walaacsan sameynta waxa saxda ah ee guusha ururkaas. Waxaad noqon kartaa HR xirfadle ah, si fudud u guji xiriiriyaha la siiyay oo safarkaaga bilow.
Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka laga helo Boqortooyada Midowday ee ay bixiso Jaamacadda London waxayna u soo bandhigeysaa kaqeybgalayaasha xiisaha leh aagagga aasaasiga ah ee tirakoobka waxtar u leh ganacsiga iyo dhowr qaybood oo MBA ah. Koorsadu waxay soo bandhigaysaa habab kala duwan oo lagu soo bandhigo xogta, itimaalka, iyo qiyaasta tirakoobka waxayna la timid shahaado si aad ugu muujiso xirfadahaaga saxda ah shaqo-bixiye kasta oo xiiseynaya.
Ma isweydiisay sida cayaaraha loo qaabeeyay, ama sidee fikradda barnaamijku u eg tahay? Waxaad dooneysaa inaad barato sida waxyaalahan u shaqeeyaan, markaa tani fursad ayey kuu tahay inaad ku kasbato xirfado aan caadi aheyn naqshadaha ciyaarta fiidiyowga, barnaamijyada, horumarinta barnaamijyada moobillada iyo xirfadaha farsamo ee looga baahan yahay in lagu qoro barnaamijyo loogu talagalay warbaahinta kala duwan ee casriga ah.
Xirfadahaaga waxaa lagu dabaqi karaa fikradaha xisaabinta kaladuwan, oo ay kujiraan naqshadeynta websaydhka, kuwani waa xirfado kudhowaad baahi kasta oo ganacsi oo casri ah sidoo kale waxaa jira fursado badan hadaad go aansato inaad iskaa u shaqeyso.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka onlaynka ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka laga helo Boqortooyada Midowday (UK) waxayna sahaminayaan doorka cuntada ee barashada caafimaadka muhiimadda ay leedahay cunnadu ka-hortagga cudurrada caafimaadka qaarkood iyo maaraynta cudurrada qaarkood ee daba dheeraada maanta.
Xirfadaada ayaa lagugu soo bandhigi doonaa fursado badan oo dhanka caafimaadka ah, waxaad noqon kartaa bare caafimaad iyadoo loo marayo barida iyo hagista dadka kale inay cunaan cunada saxda ah isla markaana taam ahaadaan.
Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka laga helo Boqortooyada Midowday waxaa bixiya Dugsiga Ganacsiga ee London oo uu soo diro Professor Julian Birkinshaw, waxay baraysaa kaqeybgalayaasha daneynaya labadaba aragti iyo aragti wax ku ool ah oo ku saabsan nooca maamulka ee ururada maanta jira.
Xaqiiqda dhabta ah waxay ahaan jirtay wax laga hadlo, hadda warshadda waxay u qalantaa balaayiin doolar waxaana loo isticmaalaa qeybaha kala duwan oo ay ka mid tahay daawada. Markaad ku soo biirto koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah, waxaad sahmin doontaa aasaaska xaqiiqada dhabta ah, wax ka baro qalabka iyo taariikhda VR iyo sidoo kale codsiyada kala duwan.
Warshadaha VR waa mid sii kordhaya waxayna muujisay sida ay muhiimka ugu tahay fududeynta nolosha, dadka aqoontaas leh waa dhif waxaana raadiya macaamiisha internetka iyo kuwa khadka ka shaqeeya, waxaad had iyo jeer waxbadan ka baran kartaa inaad fahamkaaga qoto dheer u fidiso oo aad aqoontaada u balaadhiso. .
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee ay bixiso Jaamacadda London waxayna sii qoto-dheereyneysaa aqoontaada safarkaaga VR, waxaad baran doontaa sida loo abuuro waayo-aragnimo dhab ah oo la taaban karo taas macnaheedu waa inaad abuuri karto adduun dhab ah oo dhab ah iyo dhammaan waxyaabaha ku jira. .
Waa inaad tixgelisaa qaadashada koorsadan iyo helitaanka shahaadada si aad u muujiso xirfadahaaga macaamiisha xiisaha leh.
Istaraatiijiyad shirkadeed waa istaraatiijiyad shirkaddu u adeegsato inay kula tartanto dhammaan ganacsiyada kala duwan, koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah waxaa loogu talagalay in lagu baro ardayda xiisaysa sida ay u noqdaan istiraatiijiyad shirkadeed oo wanaagsan gaar ahaan dhinaca go'aan qaadashada iyo sidoo kale inay horumariyaan fekerka muhiimka ah iyo xirfadaha gorfaynta.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka onlaynka ah ee bilaashka ah ee leh shahaadooyinka Boqortooyada Midowday ee ay bixiso Jaamacadda SOAS ee London waxaana loo abuuray in lagu baro dadka nidaamka Qaramada Midoobay iyadoo sidoo kale la siinayo cilmi baaris ku filan oo casri ah iyo aragti cusub oo muhiim ah oo ay sidoo kale noqon doonto xiisaha dadka leh khibrad dheeraad ah ama aqoon aqooneed u leh mawduuca sidoo kale.
Marabtaa inaad fahanto sida cadaaladdu ugu shaqeyso Boqortooyada Midowday (UK)? Markaa waa inaad dabagal ku sameysaa koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah si aad wax badan uga ogaato adoo raacaya dacwad nidaamka, taas oo macnaheedu yahay inaad raacdo qof la tuhunsan yahay safarka baaritaanka, dacwad oogista iyo xukunka oo dhan khadka tooska ah, sidaa darteed waxaad iskaa u ogaan kartaa naftaada sida saxda ah cadaalada danbiyada ee UK way shaqaysaa.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka laga helo gudaha Boqortooyada Midowday ee ay bixiso Jaamacadda Oxford waxaana loogu talagalay in lagu baro ardayda doorka dowladda iyo geeddi-socodka ugu weyn ee siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee sare u qaadaya bulsho kasta saboolnimada illaa barwaaqada.
Waxaad baran doontaa sida loo aqoonsado isirrada kala duwan ee gudaha ee saameeya horumarka waddan iyo fahamka waddooyinka kala duwan ee horumarka ee ay waddammadani leeyihiin.
Ganacsi kasta, urur kasta iyo xitaa ardayda dhigata dugsiyada dhammaantood waxay u baahan yihiin mashaariic horumarineed, heer sare ah oo horumar leh laakiin tani waxay suurtogal tahay oo keliya markaad tahay maamule mashruuc khibrad u leh, sidoo kale, haddaadan mid ka ahayn hadda waa waqtigii aad naftaada ku qalabayn lahayd xirfadda.
Maadaama aad tahay maamule mashruuc xirfad leh iyo shahaado si aad u muujiso, waxaad awoodi doontaa inaad si guul leh ula tacaasho oo aad u fuliso mashaariicda si hufan, waxaad si siman u heli doontaa fekerka muhiimka ah iyo awooda gorfeynta.
Manicures iyo pedicures waa qaababka daaweynta quruxda waxayna abuuraan lacag badan, iyo xilligan qof kasta oo doonaya inuu u ekaado qurux, waad ku dhejin kartaa taas oo aad uga faa'iideysan kartaa fursaddan si aad u hesho xirfad ah manicurist iyo pedicurist.
Xirfadahaaga ku jira qaybtaan quruxda leh, waxaad go'aansan kartaa inaad ganacsade noqotid ama aad u qaadatid sidii wax shakhsiyadeed si aad u buuxiso xiisahaaga laakiin wax kasta oo ay tahay weli waxaad kasbatay aqoonta si aad ugu guuleysato arrintaas iyo haddii aad go'aansato inaad ganacsi ahaan u qaadato , isku day inaad hesho shahaado si loo caddeeyo xaqiiqadaada.
Internetku wuxuu bixiyay fursado aan dhammaad lahayn, waxaad awood u leedahay inaad wax ku barato khadka tooska ah isla markaana aad ku sahamiso fursado kale oo aan dhammaad lahayn iyada oo loo marayo internetka iyo ganacsiyo badan ayaa lagu aasaasay isla isla isla markaana aan lahayn wax ka badan kombuyuutar iyo xirfado lagu soo maray koorsadan. adiguba si guul leh ayaad u bilaabi kartaa meherad internet oo kuu gaar ah ama iskood madaxbanaan u tagi kartaa.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka laga helo Boqortooyada Midowday ee laga bixiyo FutureLearn iyo ka-qaybgalka, waxaad baran doontaa mid ka mid ah xirfadaha ugu caqliga badan ee dijitaalka ah, suuq-geynta dijitaalka ah, waxaad baran doontaa habab kala duwan, xeelado iyo farsamooyin loogu talagalay suuq-geynta dijitaalka ah ee ganacsiyada loo heli karo isticmaal.
Waad u adeegsan kartaa xirfadahaaga suuqgeynta dijitaalka ah meheraddaada ama waxaad siin kartaa xirfadahaaga ururo iyo ganacsiyo kala duwan wayna ku fiicnaaneysaa shahaado.
Ganacsiyada casriga ahi waxay u adeegsadaan xogta si ay u gaadhaan go’aanno go’aamin doona tallaabada xigta ee ganacsiga waxayna inta badan go’aamisaa guusha ama guuldarada ganacsigaas, xogtu aad ayey muhiim ugu tahay urur sameynta go’aanka saxda ah.
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah ayaa ku bari doonta sida loo adeegsado xogta si loo hagaajiyo go'aamada nolosha dhabta ah, awood u yeelan karto in lagu sharaxo xogta iyadoo la adeegsanayo tirakoobyada iyo farsamooyinka garaafyada, fahamka doorka anshaxa ee falanqaynta xogta iyo xirfadaha kale iyo aqoonta looga baahan yahay in lagu fududeeyo go'aankaaga adoo adeegsanaya xog.
Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka laga helo Boqortooyada Midowday ee ay bixiso Jaamacadda Furan iyada oo loo marayo barnaamijka 'FutureLearn online' ee barashada tooska ah waxayna sahmineysaa muhiimadda amniga internetka ee howlaha maanta ee internetka. Waxaad heli doontaa xirfado iyo aqoon ku saabsan nabadgelyada internetka oo aad u adeegsan karto si wanaagsan oo aad u ilaaliso noloshaada dijitaalka ah iyo tan kuwa kaleba markaad soo bandhigayso xirfadahaaga.
Fahamka Autismku waa mid ka mid ah koorsooyinka onlaynka ah ee bilaashka ah ee leh shahaadooyinka Boqortooyada Midowday ee ay bixiso Jaamacadda Kent waxayna baraysaa fahamka Autism, oo ay ku jiraan ogaanshaha cudurka, noocyada autistic-ka iyo nolosha leh autism dhammaadka koorsada waxaad awoodi doontaa inaad aqoonsato autism dhibaatooyinka la xiriira iyo sida loo xaliyo.
Maamulka xafiis wax ku ool ah oo hufan wuxuu ku yaal bartamaha urur kasta oo guuleysta, adigoo ku biiraya koorsadan waxaad waligaa u tahay fursad aad ku xoojiso rajadaada mustaqbalka fog. Waad go'aansan kartaa inaad qaadatid koorsadan oo aad xirfadda ku dabaqdid meheraddaada ama aad u fidiso adeegyadaada kuwa xiiseynaya inay ku shaqaaleysiiyaan.
Koorsadu waa 100% khadka tooska ah oo bilaash ah, waxay sidoo kale la socotaa shahaadada dhammaystirka si loo caddeeyo xirfaddaadu inay sax tahay.
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah waxaa loogu talagalay inay sare ugu qaado aqoontaada IT-ga ee hore u jirtay heer sare, sare u qaadista aqoontaada IT-ga iyo xirfadahaaga sida sare ee ay kuugu qiimeeyaan shaqo-bixiyeyaasha iyo wax soo saarkaaga goobta shaqada ayaa sidoo kale loo horumarin doonaa, markaa waxaad u jeeddaa inaad hesho kordhin mushahar ama dalacsiin ama xitaa labadaba.
Tani waxay soo afjaraysa 22 koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin UK. Waad ku biiri kartaa koorsooyin kasta oo xiisaha kuu qabta xitaa in ka badan hal illaa inta aad la tacaali karto oo aad leedahay qaddarka saxda ah ee go'aan qaadashada.
Koorsooyinkan waxaa loogu talagalay inay siiyaan ardayda waxbarta xirfado casri ah, aqoon iyo farsamooyin ay ugu baahan yihiin inay ku guuleystaan ​​adduunka ganacsiga casriga ah. Maaddaama koorsooyinkan ay lacag la'aan yihiin, waxaa muhiim ah inaad u soo mariso xoogaa lacag ah helitaanka shahaadada, illaa shahaadada lafteeda ay lacag la'aan tahay.
Si aad ugu fiicnaato koorsooyinkan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka ku leh Boqortooyada Midowday, waa inaad iska dhaaftaa waxyaalaha kaa hor istaagaya ee kaa hor istaagi kara ama hakad gelin kara waxbarashadaada oo aad xoogga saartid iyaga waqti buuxa, ka hor intaadan bilaabin mid ka mid ah koorsada sahaminta fursadaha ay soo bandhigeyso oo hubaal ah waad awoodi kartaa inaad wax ka qabato
8 Koorsooyin Degree ah oo Bilaash ah oo Online ah oo wata Shahaadooyin loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
21 Koorsooyinka Kulliyadda Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Abaalmarinta
koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo leh shahaadooyin UK
Previous Post:25 + Barnaamijyada Kaaliyaha Caafimaadka ee Aqoonsiga ee La Aqoonsan yahay ee Shahaadada leh
Cali Reza wuxuu leeyahay,
June 13, 2021 at 3: am 26
taasi waa wax cajiib ah waxaan rabaa inaan dhameystiro dhamaan koorsooyinka
June 14, 2021 at 9: am 08
Cabdoo Saine wuxuu leeyahay,
September 12, 2020 at 12: am 07